UNGAYISUSA KANJANI IMIBIMBI ENGXENYENI ENGAPHANDLE YAMEHLO? - IMVUBABAZON.COM - UBUHLE
Ungayisusa Kanjani Imibimbi Engxenyeni Engaphandle Yamehlo?
Izindaba Ngokuvunyelwa okuphuthumayo, i-India yandisa ubhasikidi wemithi yokugoma ukuze isetshenziswe ekhaya
Ezemidlalo UBhuvneshwar Kumar uvotele i-ICC Player of the Month ngoMashi 2021
Ubuchwepheshe IQOO 7, iQOO 7 Legend India Yethula Ngempela Izici Ezilindelekile Eziqinisekisiwe
Ikhaya Ubuhle Ukunakekelwa kwesikhumba Ukunakekelwa Kwesikhumba oi-Amrutha Ngu Amrutha ngoJuni 27, 2018
Izimpawu zokuguga zenzeka kuqala esikhunjeni nasemehlweni. Ngokuqinisekile kungenzeka ukukubambezela okungenani yize kungenzeki ukugwema ukuguga. Ngakho-ke, nazi izixazululo zemvelo zemibimbi ngaphansi kwamehlo akho.
Ngaphandle kweminyaka yakho, kunezinye futhi izinto ezingadala izimpawu zokuqala zokuguga njengokungcola, ukubhema, indlela yokuphila engenampilo, ukungabi nokunakekelwa kwesikhumba, njll. Kungaba noma yini, kuyinto esingakwazi ukuyifihla kodwa engakwazi ukuyivimba nakanjani.
Kunenombolo engaphelele yemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba ethi ikunikeze imiphumela engu-100%. Kepha lokhu akunakwethenjwa ngokuphelele, ngoba leyo mikhiqizo iqukethe amakhemikhali anemiphumela emibi.
imiphumela eyingozi yokudla okungenamsoco
Ngakho-ke, nanka amakhambi enziwe ekhaya asiza ukwelapha imibimbi ekhoneni lamehlo. Ake sibone ukuthi ziyini.
1. Faka ijusi likalamula imibimbi ezungeze amehlo akho.
2. Ungasika ulamula bese uwuhlikihla phezu kwemibimbi.
Lokhu kuzosiza ekususeni imibimbi engaphansi kweso ngenxa yokuguga.
1. Ufulawa welayisi uqukethe ama-antioxidants afuthisa isikhumba.
indlela yokwenza i-surya namaskar ekhaya
2. Hlanganisa isipuni esingu-1 sefulawa welayisi ku-1 isipuni soju.
3. Faka isifihla-buso semibimbi ekhoneni lamehlo bese usishiya size some, bese usigeza. Yenza lokhu kabili ngesonto.
1. Hlikihla ngobumnene i-petroleum jelly imibimbi ngokunyakaza okuyindilinga imizuzu emihlanu.
2. Yenza lokhu kanye ngosuku ngaphambi kokulala futhi uyawubona umehluko emasontweni ambalwa.
ulahlekelwa kanjani amanoni ebusweni ngosuku
1. Thatha uwoyela kakhukhunathi uwuhlikihle kwimibimbi.
2. Ungenza futhi imaski usebenzisa uwoyela kakhukhunathi kanye ne-turmeric.
3. Hlanganisa isipuni esingu-1 samafutha kakhukhunathi kanye nengcosana ye-turmeric.
4. Faka lokhu emakhoneni wamehlo akho bese uyishiya imizuzu engama-20. Geza ngamanzi ajwayelekile.
1 tbsp amafutha omnqumo
1 tsp ijusi kalamula
1. Hlanganisa ndawonye isipuni esingu-1 samafutha omnqumo nethisipuni eli-1 lejusi kalamula omusha.
ungalunga kanjani ngesonto ngokwemvelo ekhaya
2. Faka lokhu emakhoneni wamehlo akho bese uyishiya imizuzu engu-15.
3. Ngemuva kwemizuzu engama-20, yigeze ngamanzi asivivi. Ungakuphinda lokhu ngezinsuku ezihlukile ukuze ubone imiphumela engcono futhi esheshayo.
1 tbsp iyogathi
1 tbsp uju
1. Endishini, hlanganisa ndawonye isipuni esingu-1 se-yogurt, u-1 tbsp uju namaconsi ambalwa wamanzi ama-rose.
2. Hlanganisa kahle zonke izithako bese uzisebenzisa emibeleni esezingxenyeni zamehlo akho.
3. Mayihlale imizuzu eyi-15 bese uyigeza ngamanzi abandayo.
1. Sika uvule iqabunga le-aloe vera bese ulikhama, ukuze ukhiphe ijeli.
2. Faka le jeli le-aloe on imibimbi bese uyigeza ngemuva kwemizuzu emi-5 emanzini ajwayelekile.
1. Hlanganisa upopo ukuze uthole unamathisela olubushelelezi.
ugadi kugujwa kusiphi isimo
2. Lifake ngokulinganayo endaweni ethintekile bese ulishiya cishe imizuzu eyi-15.
3. Hlanza emanzini angenalutho ngemuva kwemizuzu engu-15 bese uyoma.
1. Yenza itiye eliluhlaza ulifake esiqandisini.
2. Ungakufaka futhi lokhu kumibimbi yakho. Lokhu kungasiza ekwehliseni imibimbi esikhunjeni.
yiziphi izithelo ongazidla ngesikhathi ukhulelwe
ungayenza kanjani i-chapati ethambile ngesiTamil
i-fish curry ngaphandle kwesitayela se-coconut kerala
abesifazane abakhulelwe bangaphuza amanzi kakhukhunathi
ingubo yendabuko ye-uttar pradesh yabesifazane